Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia Azerbaijan » Tranon-kolontsaina fito fanampiny natambatra tamin'ny lisitry ny vakoky ny UNESCO
Nandritra ny fivoriany tao Baku ny sabotsy dia nanoratra toerana kolontsaina fito ny Komitin'ny Lova Iraisam-pirenena Lisitry ny vakoka iraisam-pirenena UNESCO. Ny tranokala nanampy androany tolakandro dia any Canada, Czechia, Alemana, Republic of Korea, Myanmar ary Poland. Hitohy rahampitso 7 Jolay ny soratra.
The Andiany faha-43 ny Komitin'ny Lova Iraisam-pirenena dia mitohy hatramin'ny 10 Jolay. Vaovao misimisy momba ny UNESCO